Xaalada Neymar oo weli go'aan aan laga gaarin - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Xaalada Neymar oo weli go’aan aan laga gaarin
Xaalada Neymar oo weli go’aan aan laga gaarin
Agaasimaha Isboortiga Paris Saint-Germain Leonardo ayaa sheegay in ‘wax walba aan la hagaajin marka la eego mustaqbalka Neymar.
Ka dib markii uu ku guul darreystay inuu kulan la yeesho Barcelona horaantii xagaagan, Neymar ayaa ku soo laabtay kooxda koowaad ee Parc des Princes.
Xiddiga reer Brazil ayaa ku soo laabtay soo laabashadiisa isagoo gool cajiib ah ka dhaliyay Strasbourg, inkastoo weeraryahanka uu si aad ah ula kaftamayay taageerayaasha kooxda.
In kasta oo Leonardo uu ku amaaney Neymar inuu dib ula midoobo kooxda inteeda kale, wuxuu ku adkeystay inay jiraan arrimo weli la xallin karo oo ka dambeeya muuqaalkiisa
Leonardo ayaa u sheegay RMC: “Tan iyo wax walba oo dhacay, wuxuu ciyaar aad u wanaagsan la qaatay Brazil. Wuxuu ku soo laabtay tababarka, isagoo si fiicn u ciyaaray kulankii Strasbourg.
“Markaa sheekada waa la yaab, wuxuu dhaliyay gool cajiib ah, dhamaadka ciyaarta wuu kaftamayay, wuxuu sameeyay bayaan wanaagsan wuxuuna ahaa mid daacad ah.” Haatan wuxuu joogaa PSG wuxuuna ka fakarayaa PSG.
”Ma dhihi karno in wax walba la xaliyay, wixii dhacay ka dib xagaaga, laakiin waxa uu ciyaaray kulan aad u fiican wuxuuna ahaa xirfadle weyn. Ma ahan wiil xun, isaga oo nala jooga way nasii xoojineysa.
Neymar weli qandaraaskiisa waxaa uga harsan seddex sano.
Previous articleDHAGEYSO: Barnaamijka Cayaaraha ee Radio Risaala 18-09-2019
Next articleDhageyso:-Sababta ay Xisbiyada u diideen qodobadii Shirka Dhuusamareeb
Akhriso: Natiijada Ciyaartii Kooxaha Bayern Munich & Chelsea
Golaha Ammaanka oo loo gudbiyey Warbixin ku saabsan Ammaanka Somalia & doorashooyinka
Baaritaan Lagu Sameynayo Hadii Dowladii Mauricio Macri Ay Basaastay Dakhliga Kabtanka Barcelona Lionel Messi
Faahfaahino dheeraaad ah ayaa kasoo baxaya iska horimaad Caawa Magaalada Dhuusamareeb ku dhexmaray Ciidanka dowladda iyo kuwa Ururka Ahlusunna. Iska horimaadka ayaa yimid kadib markii...